Mareykanka oo masaafurinaya Qaali hore oo Soomaaliyeed
Tarjumadii: C/raxman Ceynte | Ceyntejournalist@attbi.com
Washington (Reuters): Qaali Mareykan ah oo socdaalka qaabilsan oo magaalada San Diego ee Gobolka California ayaa amray [June 12, 2003] in la Misaafuriyo Qaali Millatari oo la soo shaqeeyey Dowladii Millatari ee Siyad Barre, isagoo lagu tuhmay inuu geystay danbiyo ka dhan ah xuquuqda aadamiga.
Cabdi Cali Nur Max'ed oo loo yiqiin (Qaali Nuur) wuxuu ahaa qaali waqtigii Siyad Barre. "Mr. Max'ed waxaa lagu heystaa inuu gacan siiyey xasuuq shacbi aan waxba galabsan, meel u dhow magaalada Hargeysa ee Soomaaliya" ayeey yiraahdeen xafiiska Socdaalka iyo Ilaalada xuduudaha.
Mr. Max'ed ayaa la sheegayaa inuu aqbalay in la Misaafuriyo, isla markaana uu imminka ku xiran yahay xabsi eey Dowladdu leedahay. Sida eey warbixintu sheegtay. Afhayeenka Waaxda Socdaalka ayaa ka gaabsaday inuu ka faalloodo inta sano ee uu Qaalli Nur joogay Mareykanka iyo xaaladiisa sharci ahaaneed sideey aheyd.
"Baaritaankani wuxuu muujinayaa in Waaxda Sodaalka iyo Wasaaaradda Ammaanka gudahaba eey ka go'an tahay inuusan waddankan gabbaad nabad ah u noqdo kuwa xusuuqyo beni'aadanimada ka dhan ah geystay" ayuu yiri Micheal Garcia. Sii-hayaha Waaxda Socdaalka "Waa muhimmada koobaad inaan ka taqallusno kuwa danbiyadaas foosha xun geystay" .
Waaxda Sodaalka iyo ilaalinta xuduudaha oo la dhisay kagadaal markii lakala diray Waaxdii Socdaalka iyo dhalasha-siinta ayaa askunta xafiis si gaar ah u baara danbiyada ka dhanka ah xuquuqda aadaha.
F.G: Maqaalkan waa mid aan soo turjumay oo kaliya, masuulna kama ahi waxa uu xambaarsan yahay.
F.G: Meelaha aan calaamadaha [ & ] ku suntay waa hadallo xaqiiqda ka fog oo wariyaha ama qofkii laga sheekeynayey uu iska sameystay.
Afeef: Linkiyada dhinacyada kala socda waa ka madax bannaan yihiin warkii asalka ahaa.